गिनिज वर्ल्ड रेकर्डमा समावेश संसारको सबैभन्दा गह्रुङ्गो ४.२५ केजीको आँप ! - Aamsanchar
गिनिज वर्ल्ड रेकर्डमा समावेश संसारको सबैभन्दा गह्रुङ्गो ४.२५ केजीको आँप !
गर्मीको मौसम आउने बित्तिकै मानिसहरुको मनमा एउटै फलको नाम आउँछ । फलको राजा – आँप । तर तपाईंले कति ठूलो आँप खानुभएको छ । धेरै ठूलो आँप खानु भएको भएपनि त्यो मुश्किलले एक किलोग्रामको होला । तर सबैभन्दा गह्रुङ्गो आँप ४.२५ किलोग्रामको छ । यसको नाम गिनिज वर्ल्ड रेकर्डमा समावेश गरिएको छ । आउनुहोस् यो शानदार आँपबारे जानकारी लिऔंः
जर्मनले संसारको सबैभन्दा भारी आँपको गिनिज वर्ल्ड रेकर्डमार्फत् कोलम्बियाका मानिसहरु मिहिनेती हुन्छन् भनेर बताउन चाहेको बताए । उनले थपे, ‘कोलम्बियाका मानिसहरु आफ्ना देश, आफ्नो जमिन, खेतीसँग प्रेम गर्छन् । हामी थुप्रै फलफूल फलाउँछौं । कोरोना महामारीका बेला आँपको यो खबरले दुःखी र तनावमा भएका मानिसहरुको मनमा थोरै खुसी पलाउनेछ । यसले उनीहरुलाई रोगबाट बाहिर निस्कन मद्दत मिल्नेछ ।’ गिनिज बुकमा नाम आएपछि पूरा परिवारले मिलेर आँपलाई काटेर खुसी मनाउँदै खाए । साथै, गिनिज टिमका सदस्यलाई पनि खुवाए ।